Tena mahazatra ahy ny misento rehefa mahita lahatsoratra manaratsy ny Arivo Taona na manao tsikera stereotypika mahatsiravina hafa. Na izany aza, tsy dia misy fisalasalana fa tsy misy fironana voajanahary amin'ny fitondran-tena eo amin'ny taranaka sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny teknolojia. Heveriko fa azo antoka ny milaza fa, amin'ny salan'isa, ireo taranaka taloha dia tsy misalasala mandray ny telefaona ary miantso olona iray, raha ny tanora kosa dia hitsambikina amin'ny hafatra an-tsoratra. Raha ny marina dia manana mpanjifa akory isika
Youtube: Inona ny paikadinao amin'ny horonantsary any?
Alahady, Jolay 16, 2017 Alahady, Jolay 16, 2017 Douglas Karr
Mifantoka amin'ny banga foana isika rehefa miresaka ny paikadim-barotra nomerika ataon'ny mpanjifanay. Ny milina fikarohana dia tsy fantsona ho an'ny orinasa sy ny mpanjifa fotsiny mba hahitana ny marika tadiavin'izy ireo, ny algorithms koa dia mari-pamantarana miavaka amin'ny fahefan'ny marika an-tserasera. Rehefa mandinika ny atiny izay manintona ny saina amin'ny marika izahay, dia mampitaha ny atiny ao amin'ny tranokalan'ny mpifaninana tsirairay mba hahitana hoe inona ny fahasamihafana. Matetika, ny iray amin'ireo fanavahana ireo dia